Ukusebenzela Izixazululo Ezinhle Kakhulu
Qaphela: Lezi zivivinyo zokugcina zingakhethwa ngokuzithandela. Akudingeki uzenze. Zifakwe lapha ukuthi ukuzenza kwakho kukusize uthole ukuqonda okwengeziwe nokukwazi ukusebenzisa izinto ozifundayo.
INGXENYE 1 YE 4
1.‎1 FUNDA: Ama-Dynamics
INGXENYE 2 YE 4
Ukusinda Nama-Dynamics Akho
2.‎1 FUNDA: Ukusinda Nama-Dynamics Akho
INGXENYE 3 YE 4
3.‎1 FUNDA: Ukusebenzela Izixazululo Ezinhle Kakhulu
INGXENYE 4 YE 4
4.‎1 Isivivinyo Esisebenzayo
4.‎2 Isivivinyo Esisebenzayo
4.‎3 Isivivinyo Esisebenzayo
4.‎4 Isivivinyo Esisebenzayo
true dynamics /zu-ZA/tools-for-life/dynamics/steps/the-dynamics.html read 3 4 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/dynamics_zu_ZA.jpg Ama-Dynamics Obukhona
3.‎1 FUNDA LENDATSHANA
Ukuthatha isinqumo ngesisombululo esihle kakhulu sokubhekana nanoma yini empilweni, kungcono ukubheka yonke into ethintekayo kuleyo nkinga futhi wenze lokho okuzosiza ukusinda kuma-dynamics amaningi.
Lokhu akusho ukuthi awunaku shabalalisa lutho. Ukufa noma ukushabalalisa kufanele kwenzeke kwesinye isikhathi ukuvula indlela yokuthi izinto ziqhubekele phambili nokwenza kube khona ubungcono. Futhi ukushabalalisa, uma kusetshenziswa ngaleyo ndlela, kulungile futhi kuyamukeleka. Isibonelo, awukwazi ukwakha isakhiwo esisha ngaphandle kokudiliza isakhiwo esidala esisamile lapho ngaphambili.
Noma cabanga nje ukuthi bekuzo kwenzekani uma ungagcina zonke iziqeshana zamaphepha owake wanikezwa zona empilweni yakho bese umelwe ukuthutha. Uma ungazange ushabalalise ezinye izinto, kuzodingeka ukuthi uhudule zonke lezo zicucu zamaphepha nakho konke okunye onakho eduze kwakho. Uyabona ukuthi bekungaba inhlekisa kanjani. Kufanele ushabalalise okuthile ngezinye izikhathi.
Kukhona indlela enengqondo yokwenza lokhu: akumele ushabalalise ngaphezulu kwalokho okudingayo, ekwenzeni indawo ilungele ukwakha. Uma uqala ushabalalisa okungaphezu kokudingayo, ungena esimweni esibi ngokushesha okukhulu.
Ama-dynamics asho, izifiso ezahlukahlukene ezigqugquzela ukusinda. Umuntu usinda kanjani? Ungasho ukuthi umuntu usinda yena kuphela ngoba esenqume ukwenza njalo esebenza futhi ejabulela impilo nabanye njengomuntu qobo lwakhe. Kepha ungasho futhi ukuthi umuntu usinda kuphela ukuba abe nezingane ukuze kube nabantu esikhathini esizayo, futhi le yindlela enhle yokubheka impilo. Noma ungasho ukuthi umuntu usinda kuhulumeni kuphela, ehlala ezweni lapho yonke impahla ingekahulumeni noma ilawulwa nguhulumeni. Ungathatha zonke izindlela asinda ngazo ezibalwe ngenhla bese uyanquma ukuthi ngayinye iyiqiniso. Kepha uma uyivivinya, uthola ukuthi udinga onke ama-dynamics ayisishiyagalombili ukuze ukwazi ukusinda. Awukwazi ukusinda kahle uma ungasindi kuwo wonke ayisishiyagalombili. Ama-dynamics angezelela ekusindeni kwempilo uqobo.
Ngakho-ke lapho kufanele usebenze isixazululo esihle kakhulu kunoma iyiphi inkinga, kufanele ukwenze lokho ucabangela wonke ama-dynamis. Isixazululo esihle kakhulu kunoma iyiphi inkinga kungaba yileso sixazululo esizasiza kakhulu, ukwakha noma ukudala kweziningi zama-dynamics ahambisana naleyo nkinga.
Isibonelo, uma umntwana ehlaselwa yinyoka, isisombululo esihle kakhulu kungaba ukusindisa impilo yomntwana futhi uyishiye iphila inyoka uma kungenzeka.
Kodwa-ke, uma kufanele ubhekane nenkinga lapho indoda enesibhamu ithumbe abantu abayisithupha futhi isizobabulala bonke, isisombululo esihle kakhulu kungaba ukumisa lo muntu onesibhamu, noma ngabe kusho ukuthi kufanele umdubule, ukusindisa izimpilo zabanye abantu abayisithupha.
Izisombululo ezilimaza i-dynamic eyodwa ukuze kusizakale enye ziletha ukudideka nokuphazamiseka ekugcineni. Kepha uma lokhu sekufanele kwenziwe, isixazululo wukusebenza wenze into ezoletha ukuhleleka okukhulu kanye nenxushunxushu encane.
Njengesinye isibonelo, ake sithi ubuyilungu leqembu (i-Dynamic yakho yesiThathu) ebelenza okuthile okuphikisana nomthetho. Usuyaqala ushaywa unembeza (i-Dynamic yakho yokuQala) futhi kuthinta umshado wakho (i-Dynamic yakho yesiBili) nomsebenzi wakho (i-Dynamic yakho yesiThathu). Uma sibheka ama-dynamics, ikhambi elihle kakhulu, ngenkathi kungakudalela izinkinga ngezinye izindlela, kungaba ukushiya iqembu elaphula umthetho.
Indlela yokwenza isixazululo esingcono kakhulu noma ukusingathwa kwanoma iyiphi inkinga ukubheka izindlela ezahlukahlukene inkinga engaxazululwa ngayo bese unquma ngalowo ozolimaza okungenani inani elincane lama-dynamics noma senze okuhle kakhulu inani elikhulu lama-dynamics. Ngamanye amagama, kuya ngesikhathi esikhona sokufeza ukubhekana nakho konke okunye okuthintekayo, sebenzisa ikhambi elingcono kakhulu. Izinto ozenzayo ukusingatha leyo nkinga kufanele kube ezokudala noma ezakhayo inani elikhulu kakhulu lama-dynamics.
Ngakho-ke, ikhambi elihle kakhulu kunoma iyiphi inkinga kungaba yisixazululo esinikeze usizo olukhulu kuwo wonke ama-dynamics.